प्रकाशित मिति: Jun 3, 2020 10:26 AM | २१ जेठ २०७७
काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो पटक थप गरेको लकडाउन समय आज रातिबाट सुरु भएको छ।
धेरै मानिसले बुधबारबाट लकडाउन खुल्ने अनुमान गरेका थिए। मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाभित्र लकडाउन खुकुलो भएको भन्दै सवारी साधन सडक लिएर निस्किए। त्यसैले मंगलबार लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा धेरै सवारी साधन कारबाहीमा परे। १८ सय ६ जना कारबाहीमा परेको थिए।
के काठमाडौं उपत्यकाभित्र लकडाउन खुकुलो भएको हो ? महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल लकडाउन खुकुलो भएको भन्ने हल्ला मात्र भएको दाबी गर्छन्। 'लकडाउन खुकुलो छैन। यो हल्लाको पछि नलाग्नु होला। कारबाहीमा पर्नु होला,' एसएसपी ढकालले भने।
ट्राफिक प्रहरीले बुधबार बिहान ९ बजेसम्म ६ सय ८९ सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जसमा ६ सय ११ वटा दुई पाङग्रे सवारी साधन रहेका छन्। एसएसपी ढकालले सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका पास बाहेक सवारी लिएर नहिँड्न पनि अनुरोध गरेका छन्। 'लकडाउन खुकुलो भयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कार्यालयको परिचयपत्र लिएर हिँड्नु भएको छ। कारबाहीमा पर्नुहुन्छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पास मात्र लिएर हिँड्नु होला,' एसएसपी ढकालले भने।
सडकमा सवारीको चाप बढेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले लकडाउन थप कडा पारिएको जनाएको छ। त्यस्तै आम नागरिकहरूको अत्यावश्यक सेवा र कामलाई थप सहजीकरण गर्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुग्ने नाकाहरू, मुख्य सडकहरू तथा भित्री सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीले चेकिङमा थप कडाइ गरेको छ। महाशाखाले दिनमा १ सय ५५ स्थान र रातमा ४५ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखी सवारी साधनहरू जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भित्री एरियाको लागि भने मोटरसाइकलमा ट्राफिक प्रहरी खटाएको छ।
उपत्यकामा चैत्र ११ गतेदेखि आजसम्म लकडाउन उल्लंघन गर्ने ४७ हजार ३ सय ३८ वटा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै पास भएका सवारी साधनले पनि काम बाहेक ननिस्कन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। 'हल्लाको पछि नलाग्नुहोला। लकडाउन खुकुलो भएको छैन,' एसएसपी ढकालले भने।
Rasmi Lama[ 2020-06-05 07:49:32 ]
Rastra bank ko pass liyera hidda chai corona nasarne ho ra?? Bektigat kaam ko lagi lakhar lakhar po hidna bhayena ta..nepal ko niyam kanun bujhnai garo😅😅
Ganesh Man Maharjan[ 2020-06-05 12:34:52 ]
Maieti gharma sadhai julus xa lockdown xaina,khali netako matra gulam garne ,afano bibek, dimag pani chalaunu pariyo ni.
Laxmanprasad Bhattarai[ 2020-06-03 09:10:27 ]
तपाईं ले भन्ने कि सरकारले हो
Aakash Kattel[ 2020-06-03 04:09:03 ]
Sutnu agadi arkae nirnaya vako hunxa...uthera office jada police ly pakdela vny dar po vayota...
Suyog Shresth[ 2020-06-03 02:42:59 ]
Badi kura kina traffic feri kina hero baneko